Su'aal: Waa maxay daawooyinka la isku caddeeyo?
Author Topic: Su'aal: Waa maxay daawooyinka la isku caddeeyo? (Read 51096 times)
« on: October 02, 2011, 03:07:41 PM »
asc salaan kadib waxaan rabaa in an ogaado dhibaatada eey i keenikaraan daawooyinka jirka loo is ticmaalo o lagu qurxiyo
yacni cosmetics ,midakale dawadaan ma wax jirkaaga jaraya oo maqaarkale kuu geynaayo mase waa dawo un oo qurxineysa jirka
Re: Su'aal: Waa maxay daawooyinka la isku caddeeyo?
« Reply #1 on: October 07, 2011, 11:40:20 AM »
Daawooyinka loo isticmaalo in la isku caddeeyo maahan wax caafimaadka u roon inkastoo ay sii kala daranyihiin oo ay jiraan qaar halis ah oo keeno kansarka maqaarka iyo dhibaatooyin kalaba.
Daawooyinka la isku caddeeyo waa dhowr nuuc wayna kala daran yihiin:
1- Nuuc lagu daray daawada loo yaqaano "Steroid-ka" waa daawo lagu daaweeyo xanuuno badan oo jirka ku dhaca, waxaana laga qaataa qiyaas loogu talagalay, qofkane joogto looma siiyo maadaama ay waxyeello jirka u gaysato, laakiin daawooyinka la isku caddeeyo waxaa lagu soo daraa qiyaas aad u badan oo daawadaan ah iyadoo halis galinayso qofka caafimaadkiisa, warbixin ku saabsan daawadaan iyo dhibaatada ay keensato halkaan ka akhriso: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,3223.0.html
2- Nuuc ka samaysan waxyaabo yareeya midabka maqaarka ee loo yaqaano "Melanin" waxyaabahaas oo qaarkood mamnuuc ka ahd dunida oo aan lagu soo dari karin laakiin shirkadaha qaar way ku soo qariyaan, waxaana ka mid ah maadada loo yaqaano "Mercury" oo sun ah haddii jirka u gudubto waxayna keentaa Kansarka maqaarka, halkaan ka akhriso kareem ay soomaalida isticmaasho oo horay looga digay markii lagu arkay maadadaan: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,3490.0.html
Ma jiro kareem ka samaysan fitamiino ama qudaar ama wax dabiici ah oo maqaarka badali karo, dad ayaa si qaldan u aaminsan in wixii ku qoranba geed-daaweed ama dabiici in ay sax tahay in la marsado, iska ilaali waa istraatiijiyo ay shirkada qaarkood u adeegsadaan suuq-geynta daawooyinkooda.
Dhibaatooyinka ugu caansan ay daawooyinkaan keenaan waxaa ka mid ah:
Maqaarka oo midabka ka guuro oo u soo laaban waayo.
In maqaarka uu khafiif noqdo oo halis ugu jiro dhaawac kasta oo fudud inuu u adkaysan kari waayo, markuu dhaawac gaarane uusan bogsoonin ama haar yeesho oo aan fuqaynin.
Midabka maqaarka oo kala duwan, jirka midabkiisa oo aanan isku ekeyn maadaama daawada la mariyay ay si isku mid ah u badalin midabka.
Maqaarka oo gaduuto ama nabro yeesho ama markii cadceedda ku dhacdo huro, kadibne yeesho nabro isku badali karo kansar.
Cuncun siyaado ah oo aadan xoqi karin haddii kale maqaarka fiiqmo.
Jirka oo xasaasiyad ka qaado daawada la mariyay, wuxuuna billaabaa barar iyo hur, kaasoo halis galin kara maqaarka oo idil, waana dhibaatada ugu badan ee isku arkaan dadka isticmaalo.
Daawooyinka la isku caddeeyo qaabka ay u shaqaynayso waa qaab ay ku yarayneyso ama u baabi'neyso midabka Melanin ee ku jira unguyada maqaarka iyadoo is baddal ku samaynayso taasoo caafimaad ahaan halis ah maxaa yeelay unugga markii la badalo waxaa yaraanayso dulqaadkiisa u leeyahay waxyaabaha ku hareyreysan jirka sida: kuleelka, qabowga, dhididka, caabuqa iyo waxyaabo kale.
Boqolkiiba 90% kiimikooyinka la isku caddeeyo in ay ku jiraan labo maaddo oo aad halis ah oo ka mamnuuc ah wadamada qaar, maadooyinkaas oo kala ah: Mercurous chloride iyo Hydroquinone.
Badanaa daawooyinka la isku caddeeyo ee laga helo soomaaliya iyo dunida sadaxaadne waa kuwa noocaan ah.
Talo ku socoto haweenka:
Ilaahay ha looga cabsado maqaarka aad hugan tihiin, isagaa idin siiyay idinkana xisaabtami doono, ha qaadanin go'aan aad ka shalaayi doontid mustaqbalka.
Diraasad la sameeyay waxaa lagu ogaaday boqolkiiba 80% dadka isticmaalay daawooyinka la isku caddeeyo in ay ka shallaayeen waqti dambe, taasoo ka noqosho lahayn.
Ilaahaygii kuu hibeeyay oo ku siiyay midabka aad ku dhalatay, ku mahadi oo ku dadaal ilaalinta iyo nafaqaynta maqaarkaas, ka fogow wixii caafimaadkaaga iyo muuqaalkaagaba halis galin doono mustaqbalka.
Caqli yeelo ee ha ku dhicin dabinka shirkadaha ka macaasho kareemyadaas, Babay-ga ama Qajaarka laguugu soo sawiray kareemka dushiisa si laguu siro, maad isticmaashid iyagoo dabiici ah haddii dabiici jaceel kaa tahay.
Waxaan la kulmay gabdho badan iyo haween qarash ku bixinaya sidii ay isaga daaweyn lahaayeen dhibka ka soo gaaray daawooyinkaas.
Fadlan haddii cillad maqaar qabtid, kala xiriir dhakhtar isagaa kaala talin doono, haddii ay jirto su'aalo ama faahfaahin ku saabsan qoraalkaan waad na soo waydiin kartaan.
« Reply #2 on: May 05, 2015, 02:36:34 PM »
Asc aad ayaad u mahadsantihiin dadaalka aad ku jirtaan iyo daryeelka dadkeena aad ku cawinaysan allaha idinka abaal mariyo
waxaa jira dawo ay habluhu aaad iyo aad ugu badanyihiin batnafaad ayaan anigu u aqaan qofka hadaad ku tidhahdid iska daa dheeha ayaay ka qaadi waxay kugu jawaabi wax ma yeelayso aan qurux ka ahayn dawadaas hablaha somaliyeed ku badan maxay tahay?!
« Reply #3 on: May 07, 2015, 11:19:30 AM »
Daawada aad tilmaamayso waxaa la dhahaa "Betnovate" waxay soo galaysaa qeybta 1-aad ee aan kor uga soo hadalnay daawooyinka la isku caddeeyo.
Betnovate waxay 5-goor ka xoog badan tahay ama ka dhib badan tahay daawada kale oo iyadane aad u isticmaalaan hablaha soomaaliyeed oo loo yaqaanno "Dermovate" oo aan horay uga hadalnay dhibka ay leedahay, halkaan ka akhriso: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,3209.0.html
Dadka ka indho-adeegayo joojinta daawooyinkaan waa laba mid:
1- Qof u bareeray oo og in ay dhibaato leedahay oo aan caafimaadkiisa ka fakarayn sida qofka sigaar cabayo oo kale.
2- Qof ay ka taahil aqoon darri iyo jaahilnimo oo u baahan in la wacyi galiyo si uu uga fogaado.
Qofka labaad haddii aad aragtid la socodii qoraalkaan.
Views: 61976 May 22, 2009, 01:41:01 PM
Views: 63991 February 05, 2008, 07:56:57 AM
Views: 58242 September 01, 2009, 02:23:15 PM
Views: 42154 May 06, 2018, 01:17:25 PM
Views: 40570 January 22, 2019, 08:47:10 PM